Etoille Bulle no mitondra antsika ny Memento Mori | Famoronana an-tserasera
Raha misy mpanakanto efa nilalao ny fomba fahitantsika zavatra Ao anatin'ny segondra voalohany hijerena ny sary, ankoatry ny hafa, manana an'i Salvador Dalí izahay. Ny tsy fahazotoany ihany koa dia nandalo nanafina tarehimarika hafa tao anatin'ny olon-kafa ary noho izany dia nilalao niaraka tamin'ny sain'ireo nijery ny hosodoko mba hamela azy tsy ho eo am-pelatanana. Ny tena tanjony.
Androany no mihaona tovovavy roa milalao ao amin'ny efitranony miaraka amin'ny bitro mainty mamorona endrika cadaverous izay tena miafina ny tanjon'ny mpanoratra. Mpanakanto fantatry ny Etoile Bulle izay nahazo aingam-panahy avy amin'ny sanganasan'i Allan Gilbert izay nampiasa ity fomba ity koa hisolo tena karandoha, fa tamin'ny asany tamin'ny vehivavy mijery fitaratra misy dikany lalina kokoa.
Ireto misy ifandraisany amin'ny asan'i Allan Gilbert van mankany amin'ny zavatra lalina sy olombelona Ahoana ny maha-zava-poana ny zava-poana sy ny ampahany amin'ny hafatra ahafahanao manana ny zavatra ara-nofo sy ny vola eto amin'izao tontolo izao, na efa nanao ny zava-drehetra, fa amin'ny farany, tsy maninona izany satria ny farany dia mahatratra ny olon-drehetra. Eto ny farany dia ny fahafatesana.
Ary manomboka an'i Dalí ity fidirana ity dia misy koa ny Memento mori anao manokana, fitenenana latinina midika hoe "tsarovy fa mety maty ianao" amin'ny heviny fa ny olona dia tokony hahatadidy mandrakariva ny fahafatesany.
Etoille Bulle no mitondra antsika ny Memento mori miaraka amintsika asa marefo sy mangoraka kokoa noho ilay manahirana antsika amin'i Gilbert sy Dalí. Na dia tsy nilavo lefona aza i Bulle mba hisolo tena amin'ny fomba somary henjana toa inona ny valanoranon'ny karavasy amin'ny fianjeran'ireo akanjon'izy roa vavy.
Toy ny mahazatra, azonao atao ny miditra amin'ny asan'ity mpanakanto manana predilection ho an'ny manga na dia misy fikitika manokana aza avy aminy Tumblr.
Hiverina any Dalí, ilay mpilalao sarimihetsika ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » The Memento Mori avy amin'i Etoille Bulle